Khabiirka Kala Duwan: Arrimaha Ammaanka WordPress ee Qofwalba waa inuu Ogaahaa
Qaar badan oo ganacsi iyo hay'ado ku dhisan ayaa internetka ku socda. Natiijo ahaan, internetkabeerku wuxuu noqonayaa bartilmaameedka ugu wanaagsan ee dambiilayaasha internetka ah si ay u fuliyaan weerarradooda. Ganacsadayaal badan iyo milkiilaha ganacsiga e-commerce ma sameeyowaxay leeyihiin aqoon iyo xirfad ku filan oo ay ku dhistaan ​​kuna martigeliyaan boggooda internetka - curso online fotografia. Sidaa darteed, waxay doortaan hababka sida DIY qalabka iyo martigalinta martidasida HostGator. Qaar badan oo ka mid ah nidaamyada maareynta maadooyinka, kuwaas oo ay ku tiirsan yihiin waxaa ka mid ah bogga WordPress. WordPress wuxuu ku xiran yahay ilaa 24% dhammaanshabakadaha caalamiga ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kombiyuutarrada ay leeyihiin meel weyn oo lagu ciyaaro si ay ula kulmaan dadka ka soo horjeeda. Helitaanka habka caddaynta hack-kabadanaa waa riyo.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, waxay bixisaa sababo ay dadku door bidaan WordPress. Ugu horreyntii, waxay leeyihiin barxad furan oo furan iyo sidoo kale plugins badan, taas ooayaa qaban kara hawlaha waaweyn. Natiijo ahaan, WordPress waa habka maareynta maadada content, kaas oo u adeega si dadka loogu suurtageliyo in ay marti geliyaan boggag badan.Si kastaba ha ahaatee, WordPress wuxuu leeyahay faa'iido daro. Inkastoo ay jiraan dad badan oo abuura bogag ku yaala WordPress, inta badan bartilmaameedka hacker-kaGoobaha WordPress sidoo kale. Tusaale ahaan, haddii hacker uu helo dalool ah nidaamka ammaanka ee WordPress, ama plugin oo loo heli karo WordPress,waxay si dhakhso ah u xiri karaan tiro badan oo weeraro ah, kuwaas oo u diri kara macluumaadka macmiilka ama macluumaad kale oo qiimo leh meelaha qarsoodiga ah.
Spammers waa dadka isku dayaya in ay dhibsadaan dhibbanayaasha hawlaha qaar,laakiin ujeedada ka dambeysa qarsoodiga ma aha arrin caadi ah. Tusaale ahaan, spammers qaarkood ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay dadka ku xakameeyaan isku-xirnaanta faafa. In kalemararka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin bogag phishing, kuwaas oo siinaya macluumaad badan oo qiimo leh. Da'yarta casriga ah, spammers waxay isticmaalaan lifaaqyo, kuwaas oo ku jiranacasnimo sida Trogans. Waa in aad macaamiishaadu dareen ka dhigtaa noocyada weerarrada noocaas ah. Hackers ayaa ka dambeeya weerarrada spam oo dhan. Waxay awoodaanwaxay ubaahan yahiin aqoonsiga isticmaalaha, macluumaadka kaararka deynta, maamulka kumbuyuutarka ama waxyaabo kale oo wasakh ah oo ka dambeeya weerarradooda. Isticmaalka tallaabooyinka amnigawaayo boggaagu wuxuu ka badbaadin karaa weeraro badan.
Weerar-yahannada, qoryaha iyo botnets
Marka la xakameynayo weerarrada hackka, waa muhiim in la ogaado qofka ama waxa uu yahayka dambeeya weerarka. Weerarrada dadka ayaa ah dad dhab ah oo fulinaya hawlaha ujeedadooda. Bots waa software fudud sida robots,oo wakiil ka ah qof fuliya hawsha. Dhanka kale, botnet waa shabakad badan oo laydh, sida malaayiin, oo la soo diri karosi loo dhibaateeyo kala duwanaansho iyo natiijooyinka u soo gudbiyaan hacker meel gaar ah.
Ammaanka boggaaga iyo sidoo kale macaamiishaada waxay ku xiran yihiinsi xoog leh adiga oo ah maamulaha. Markaad abuureyso bogag, waxaan iska indha-tirnaa suurtagalnimada dambiyada internetka, oo ka dhigi kara bogga intarnetka ee ganacsiga oo dhanhoos. Dhibaatooyin badan oo SEO ah ayaa lumay gacanta gacansakoolayaasha kuwaas oo ka caawiya tartamayaasha iyagoo soo bandhigaya tartan aan caddaalad ahayn. Xaaladdu way sii xumaaneysaaiyada oo website-yada WordPress, badanaa sababtoo ah nidaamyada ammaankooda ayaa loo yaqaan iyaga. Intaa waxaa dheer, WordPress wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee boggaga. Qaarkoodfarsamooyinka, kuwaas oo naftaada ilaalin kara WordPress ayaa ku jira tilmaamahan. Waxaad sidoo kale hubin kartaa ammaanka ammaankaaga, martida sidoo kalesida horumarinta SEO ee Google iyada oo loo marayo hubinta ammaanka.